XOG: Xasan Sheekh oo yiri Bilaash uma sujuudine Xil Iyo Xoola doon ayaan ahaa. – Gedo Times
XOG: Xasan Sheekh oo yiri Bilaash uma sujuudine Xil Iyo Xoola doon ayaan ahaa.
29th January 2016 admin Wararka Maanta 0
Madaxwayne Xasan Sh Maxamuud ayaa wuxuu ka dagaalamay oo uu aad ooga carooday Wararka ka dhanka ah ee labadii maalmood ee la soo dhaafay, ay Warbaahinta Soomaalidu aad u baahisay,iyadoo guud ahaan shabakadaha laga daawanayey Sawiradaaas.
Saraakiisha Villa Soomaaliya ku sugan , ayaa xaqiijiyey in Xasan Sh Maxamuud uu ay meel adag ka gaartay uuna si caro leh ooga hadlaya sawirada lagu baahinaayo barraha ay bulshadu ku wada xiriirto, ayna soo dedejisay in si deg deg ihi uu ugu soo laabto Magaalada Muqdisho.
Warbaahinta ugu afka dheer Caalamka ayaa siwayn ooga hadashay Socdaalkii Xasan Sh Maxamuud balse dadka Soomaaliyeeed waxaa oogu aragtid dheeraayeen Sawirada lagu ga Wargeysayada Ceelamadaka, Waxay dad badan oo Soomaali ah sheegeen inwaxaa ugu badan socdaalkii uu ku tagey Magaalada Eldoret, in uu bahdilay Madaxweynaha
Madaxwayne Xasan Sh Maxamuud ayaa wuxuu ka dagaalamay oo uu aad ooga cadhooday Wararka ka dhanka ah ee labadii maalmood ee la soo dhaafay, ay Warbaahinta Soomaalidu aad u baahisay,iyadoo guud ahaan shabakadaha laga daawanayey Sawiradaaas.
Saraakiisha Villa Soomaaliya ku sugan , ayaa xaqiijiyey in Xasan Sh Maxamuud uu ay meel adahg ka gaadhay uuna si cadho leh ooga hadlaya sawirada lagu baahinaayo barraha ay bulshadu ku wada xiriirto, ayna soo dedejisay in si deg deg ihi uu ugu soo laabto Magaalada Muqdisho.
Warbaahinta ugu afka dheer Caalamka ayaa siwayn ooga hadashay Socdaalkii Xasan Sh Maxamuud balse dadka Soomaaliyeeed waxaa oogu aragtid dheeraayeen Sawirada lagu daabay Wargeysayada Ceelamadaka, Waxay dad badan oo Soomaali ah sheegeen inwaxaa ugu badan socdaalkii uu ku tagey Magaalada Eldoret, in uu bahdilay Madaxweynaha Kenya.
Kadib markii aanu ku soo dhawayn Garoonka Eldoret, inuu u sajuuday xuskii askarta Kenya loogu sameeyay Eldoret iyo waxa uu kaga aamusan yahay xasuuqa ay diyaaradaaha Kenya ka wadaan Gobolka Gedo.
Siyaasiyiin Soomaaliyeed ayaa kuu sheegaaya in Madaxweyne Xasan uu qudhiisu dareensan yahay, in ay sumcad xumo u tahay, inuu ka aamuso dhibaatada loo gaysanaayo shacabkiisa.Siyaasiyiinta isha ku haaya arrimaha dalka, ayaa waxay qabaan in Madaxda Somalidu yihiin kuwo dareen ka qaba in xilalkoodu ay ku waayaan, haddii ay si adag kaga horyimaadaan ficilada guracan ee dalalka deriska.
Inta badan dadka Soomaaliyeed , ayaa mooddaa inay si isu midda kaga dhiidhisay duqeymaha xiriirka ah, ee diyaaradaha dagaalka Kenya ka wadaan Degmada Ceelcadde iyo deegaanada kale ee hoos-tagga, iyadoona ay bulshadu si wayn u dhaliishay Madaxda Qaranka, oo aan weli ka hadlin duqeymahaas. Kenya.
Inta badan dadka Soomaaliyeed , ayaa mooddaa inay si isu midda kaga dhiidhisay duqeymaha xiriirka ah, ee diyaaradaha dagaalka Kenya ka wadaan Degmada Ceelcadde iyo deegaanada kale ee hoos-tagga, iyadoona ay bulshadu si wayn u dhaliishay Madaxda Qaranka, oo aan weli ka hadlin duqeymahaas.
TOP News: Kenya oo Maamulka Kismaayo ku wargalisay in ay isaga baxeyso Soomaaliya.
Degdeg: Axmed Madoobe oo Kismaayo ku laabtay sheegayna in uusan raali ka aheyn heshiiskii Muqdisho lagu gaaray.